Mpanamboatra varavarankely misosa tsara indrindra | Media
Ny endrika vaovao dia mahatonga ny habaka hiovaova kokoa! Olona tia fitetezana varavarankely mieritreritra fa mety izy io, manome fomba fijery tsara kokoa sy rivotra kokoa, ary mamonjy habaka. Ireo izay tsy tia dia mihevitra fa mahantra amin'ny famehezana ary fahombiazan'ny fanoherana ny rivotra. Raha nanatsara ny etsy ambony ny pro ary nanova ny lafy ratsy hamoronana fitetezana tsipika MDTC152A varavarankely
Rafitra fanidiana mandeha ho azy
Manakatona semi automatique
Rafitra fanidiana semi-mandeha ho azy ary fiatoana tsy manam-paharoa mpiambina amin'ny alàlan'ny fomba fanidiana varavarankely nentim-paharazana.
Harato tsy hita maso, famolavolana manify
Takelaka manidina Tabilao fitaratra vaovao sy firafitry ny fifamatorana flynet famolavolana. Tselatra miafina, mifanelanelana tery. Maoderina sy milamina jereo. Fijerena panorama.
Famolavolana olombelona, ​​asan'ny anti-swing
Fiadiana amin'ny sandry
Roller manohitra savily azo ovaina
Mahazo aina sy miala sasatra miankina amin'ny sandry rehefa mijery ny scenery. Roller anti-swing Ajustable dia mahatonga ny fivezivezena mafy orina kokoa ary malama
Ny fonosana nafenina dia manome fomba fijery lehibe. Anti-vovoka sy bibikely ny flynet afenina miafina dia afaka mamonjy ny ezaka fanadiovana.
Toro-marika multi-asa hanampiana vidiny ho an'ny mpanjifa
MEDO dia manana safidy profil profil auxiliary maro hanampiana fiasa marobe amin'ny varavarankely sy ny varavarana, hamaly ny filan'ny mpanjifa isan-karazany. Ankoatr'izay, ny MEDO dia manana ekipa R&D matanjaka hanamboarana vahaolana ho an'ny asa manokana ho an'ny tetikasa.
Tabilao tery amin'ny famolavolana manify:
Satria ny olona maoderina dia aleony ny varavarankely ary varavarana amin'ny habe lehibe misy fahitana tsara kokoa sy jiro.
Rafitra manify MEDO misy tery ny frame dia manome fahafaham-po an'ity filana ity.
Fitaovana avo lenta:
Fiantohana 10 taona ho an'ny fitaovana, izay ny fari-pahaizana avo indrindra amin'ny indostria.
Fitaovana marika Medo, marika Alemana hardware ary marika amerikana no misy.
Misy ny fomba fampiasa isan-karazany.
Raisina an-tanan-droa ny serivisy fanamboarana.
Ny gaskets anay dia vita amin'ny premium premium akora ilaina amin'ny fampisehoana tena tsara ao famehezana, fanoherana ny toetr'andro ary porofon'ny fahanterana.
Serivisy tokana sy mpamatsy vahaolana ara-teknika
MEDO dia manolotra serivisy fijanonana tokana miaraka amin'ny vahaolana tsara indrindra hahitana ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny toha-pamokarana any Foshan China, ny MEDO dia mahazo tombony amin'ny fironana indostrialy, ny rojom-pamokarana, ny vidiny ary ny fitaterana sns.
Teo aloha: Rafitra fampiakarana Slim & Slide
Manaraka: Slimline Sliding System